संकलन केन्द्र फेर्दै गोरु ‘तस्कर’ – जागरण अनलाइन
संकलन केन्द्र फेर्दै गोरु ‘तस्कर’
२०७५ मंसिर २०, बिहीबार १८:४० मा प्रकाशित
देउखुरी, २० मंसिर ।
दाङको देउखुरीमा गोरु तस्करीका लागि संकलन केन्द्र स्थापना भएको खुलेको छ । विभिन्न स्थानबाट एकै स्थानमा जम्मा गरेर राति निकासी गर्ने उद्देश्यले संकलन केन्द्र स्थापना भएको र हल्ला भएपछि तस्करहरुले केन्द्रसमेत परिवर्तन गरिरहेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
देउखुरीका केही स्थानलाई संकलन केन्द्रको रुपमा प्रयोग गरिरहेको फेला परेको छ । लमही नगरपालिका वडा नम्बर ८ असानीस्थित राप्ती नदी किनारको खाली क्षेत्रलाई गोरु संकलन केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको र अहिले त्यो क्षेत्र परिवर्तन गर्दे संकलन केन्द्रहरु परिवर्तन भइरहेको स्थानिले बताएका छन् ।
लमही नगरपालिका वडा नम्बर ८ को असानीमा करिब एक महिना लगाएर झन्डै २ सयको हाराहारीमा गोरु संकलन गरेर राखेको स्थानीयले बताएका छन् । राजपुरमा युवा र स्थानीयबीच तीन दिन अघि भएको विवादका कारण तस्करहरुले त्यहाँबाट धेरैजसो गोरु अन्यत्रै लगिसकेका छन् । त्यहाँ जम्मा भएका गोरु कहाँ गए, कसरी गए ? भन्नेबारे न त्यहाँका स्थानीयले भन्न सकेका छन् त प्रशासनले नै । देउखुरीको बिभिन्न गाउँबाट सस्तो मुल्यमा खरिद गरेर देश बाहिर चर्को मुल्यमा गोरु बिक्री हुने भएकोले पछिल्लो समययता गोरुको तस्कर ह्वात्तै बढेर गएको छ ।
गोरु तस्करको सम्बन्धमा आफ्नो नाम नबताउने एक स्थानीयका अनुसार शुरु शुरुमा त्यो गाउँमा दुई चार गोरु ल्याउँदा निकै मोटा राम्रा देखिने गोरु यहाँ ल्याएपछि न समयमा पानी न समयमा घाँस पाउँदा साह्रै दयनीय अवस्था थियो । यदि सरकारले नेपाल बाहिर बिक्री वितरण गर्ने अनुमति दिएको हो भने राति–राति किन ट्रक लोड गराएर लैजान्छन् ? यदि दिएको हैन भने पशु अधिकार हनन् भएको किन थाहा पाउदैनन् ? गोरु तस्करको मुख्य जाडो पत्ता नलगोस् भनेर तस्करका नाइकेले असहाय बालबालिका र श्रीमानबाट पीडित भएका महिलालाई समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यति मात्र हैन देउखुरीका धेरैजसो बजार क्षेत्रमा कुनै बेला सदाकै जाम गरेर बस्ने अडिने छाडा पशु चौपायाहरू कहाँ गए भन्ने बारे टिकाटिप्पणी शुरु हुन् थालेको छ ।
यसका साथै राप्ती गाउँपालिकाको भगवानपुर गाउँमा गोरुहरु संकलन गर्ने र रातिको समयमा ट्रकबाट अन्यत्र निकासी गर्ने गरेको पनि तथ्य फेला परेको छ । पछिल्लो समय गोरु तस्करी भैरहेको बारे समाचार बाहिर आउन थालेपछि तस्करहरुले संकलन केन्द्र परिवर्तन गर्न थालेका छन् । असानी गाउँ नजिकै बाँसघारीमा गोरु बाँधेर राखिएकोमा गएराति तस्करहरुले त्यो ठाउँ भन्दा एक सय मिटर पर झाडीमा लुकाएर गोरु बाँधेका छन् । करिब १३ वटा गोरु त्यहाँ बाँधिएको अवस्थामा छन् ।
प्रहरी प्रशासनले गोरु तस्करीबारे छानबीनमा भने गम्भीरता नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ । राजनीतिक रुपमा तस्करहरुलाई संरक्षण रहेको स्थानीयको दाबी गरेको छ । यता हिन्दू जागरण नेपाल लमही नगर समितिले गाई–गोरु तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । प्रहरी प्रशासनले गाई–गोरु ओसारपसारको बारेमा सबै जानकारी दिन सक्ने भन्दै समितिले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा गाई–गोरु तस्करी भैरहेपनि प्रहरी, प्रशासनले कारबाही गर्न नसकेर पन्छिन खोजेको अरोप लगाएको छ ।
हिन्दू जागरण नेपाल लमही नगर समितिका अध्यक्ष नेत्रराज सिंह ठकुरीको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा गोरु तस्करी भएको छैन वा थाहा छैन् भनेर प्रहरी प्रशासनबाट अनिभिज्ञता प्रकट गर्नु अत्यन्तै उदेकलाग्दो, लज्जास्पद र गैर जिम्मेवार कुरा रहेको उल्लेख छ । गोरु ‘तस्कर’सँग भएको झडपको क्रममा पक्राउ परेका लमहीका अर्जुन गुप्तालाई ईलाका प्रहरी कार्यालय गढवाले गुप्तालाई जमानीमा छाडेको बताएको छ । गत आईतबार बेलुका राजपुर गाउँपालिका–४ बसन्तापुरमा स्थानीय गाउँले र युवाहरुको बीचमा झडप भएको थियो । सो क्रममा सातवटा मोटरसाईकलमा आगजनी भएका थिए ।
वर्तमान सरकारले काम देखाउने यो उत्तम अबसर हो– नेता नेपाल २०७५ मंसिर २०, बिहीबार १८:४०
दाङमा बालिका बलात्कार गर्ने व्यापारी आचार्यलाई थुनामा राख्न अदालतको आदेश २०७५ मंसिर २०, बिहीबार १८:४०
दाङको लक्ष्मीपुरलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिदै २०७५ मंसिर २०, बिहीबार १८:४०